Ugwetshiwe owesifazane owabulala ingane yesoka | News24
Ugwetshiwe owesifazane owabulala ingane yesoka
Cape Town – U-Anthea Kleynhans, 39, ugwetshwe yiNkantolo eNkulu yaseWestern Cape iminyaka engu-18 ebhadla ejele ngecala lokubulala ingane yesoka lakhe, uLache Stols, 3, kusho iNational Prosecution Authority (NPA) ngoLwesihlanu.
Inkantolo igwebe uKleynhans iminyaka engu-13 ngecala lokubulala neyisikhombisa ngokuhlukumeza ingane, ngoLwesine.
Iminyaka emibili ngecala lokuhlukumeza uzoyidonsa kanye kanye nesigwebo sokubulala.
IJaji uNolwazi Boqwana uthe besingamfanele ummangalelwa isigwebo sikadilikajele.
UBoqwana ufike kulesi sigwebo ngenxa yokuthi uKleynhans ubeqala ukwephula umthetho.
OLUNYE UDABA: Ubuyela enkantolo 'owabulala ingane wayifaka e-toilet edinwe yisoka'
Okhulumela i-NPA u-Eric Ntabazalila uthe uKleynhans wahlukumeza le ngane yentombazane isikhathi esiyizinyanga ezintathu.
Uthi uLache wayenezibazi futhi elimele umzimba wonke.
Uqhuba ngokuthi le ngane yayiphuke izingalo, kuchachambe ugebhezi lwekhanda, ilimele ezimbanjeni ngenxa yokubanjwa kabuhlungu, ilimele emlonyeni kutshengisa ukuthi yayishaywa ngamaqupha futhi inezibazi zokusha ezinyaweni.
UNtabazalila uthe izibazi okuyizo ezazizimbi kakhulu kwavela ukuthi le ngane yazithola esikhathini esingangamahora angu-18 ngaphambi kokuba idlule emhlabeni.
Udokotela owahlola isidumbu sale ngane wachaza ukulimala kwayo "njengesihluku angakaze asibona ngaphambilini".